Naannoo Somaaleetii namootni kuma 50 oli buqqaafaman - BBC News Afaan Oromoo
Naannoo Somaaleetii namootni kuma 50 oli buqqaafaman
Haaromsameera 17 Fuulbaana 2017
Namoota naannoo Somaalee irraa buqqaafamanii magaalaa Harar qubachaa jiran
Walitti buu'iinsa tibbana Naannoolee Oromiyaa fi Somaalee jirdduutti umamee tureen walqabatee, lakkoofsi namoota bakka jireenya isaanitii buqa'anii kuma 55 oli gaheera.
Dhalattoota Oromoo sababa walitti bu'iinsa tibbaatiin bakka jireenyaa isaanitii buqqaafamanis magaaloota Harari, Cinaaksan, Mii'essoo fi Baabiilee keessatti dahaataniiru.
Buqqaafamuu kanaaf sababa kan ta'e hiriira mormii magaaloota baha harargee keessatti kibxata darbe gaggeefame irratti jeequmsa uumameen namootni 18 du'uu isaanii akka ta'e dubbi himaan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Addisu Araggaa Jimaata darbe BBCtti himanii turan.
Obbo Addisuun akka jedhanitti, hiriirri mormii kun bulchaan aanaa Gursum duraanii, miseensi poolisii kora bittinneessaa Oromiyaa tokkoo fi hojjetaan mootummaa isaan waliin ture tokko gursum irraa qabamanii harka Liyyuu poolisii naannoo somaaleetti reebamanii ajjeeffamuu isaaniitiin kan ka'e dha.
"Namoota du'an 18 keessaa 12 dhalattoota somaalee yoo ta'an namoonni 6 ammoo dhalattoota Oromoo," ta'uu himaniiru.
Namootni gama lamaaniinu lubbuun isaani darbe jeequmsa ka'e keessatti kan qooda hin qabne namoota nagaa ta'uu fi namoota ajjeechaa kana raawwatan to'atanii seerattii dhiyeessuuf hojiin eegalamuus dubbataniiru.
Rakkoon naannolee daangaa mootummoota naannoo lamaan gidduutti uumame bubbuleera.
Kunis humni addaa mootummaa naannoo somaalee, milishaan naannichaa fi miseensonni raayyaa waraanaa mootummaa Riippabliika Somaaliyaa daangaa Oromiyaa seenanii uummata nagaa irraatti haleellaa raawwachuu isaaniitiin kan eegaledha jedhan.
Miseensi raayyaa waraanaa Riippabliika Somaaliyaa tokko qabamee qaamolee nageenyaa naannoo Oromiyaa harka akka jirus Obbo Addisuun himaniiru.
Gorsaan pireezidantii nannoo Somaalee, Mohammed Bile garuu poolisii Oromiyaatu naannolee daangaa irratti lammilee nagaa Somaalee haleelaa jira jechuun himannaa mootummaa naannoo Oromiyaan irratti dhiyaate haalanii jiru.
Waldhabbii naannolee Somaalee fi Oromiyaa gidduutti ta'aa jiruun namonni buqqaafaman
Kanumaan wal-qabatee dhalattonni oromoo naannoo somaalee keessa jiran kumaatamaan lakkaa'aman naannicha gadi dhiisanii akka baahan godhamaa jira.
Hanga Kamisaatti dhalattoonni Oromoo kuma 20 ol naannicha gadi dhiisanii akka bahan godhamanii, magaalaa Harar, Baabbilee fi Cinaaksan akka qubatan taasifameera.
Haadha warraa fi daa'ima isaanii tokko waliin Jigjigaadhaa baqatanii magaala Baabbilee kan gahan Obbo Abdulhakim Mahammad Kaamil "ollaa waliin jiraachaa turre dabalatee poolisiin naannoo Somaalee uummata Oromoo magaala Jijjigaa keessa jiraatan dararaa jiru," jechuun BBCtti himaniiru.
"Wanta dhalli namaa namaratti hin yaadne nuratti yaadan, lubbuun teenya takkittin bahuusheetti rabbiif galata qabna" kan jedhan Obbo Abdulhakim qabeenya qaban mara dhiisanii baqachusaanii, reebichi fi ajjeechaan dhalattoota Oromoo magaala Jigjigaa keessa jiran irratti qaqqabaa jiru hammaataa ta'uusaa dubbatan.
Mootummaan naannoo Oromiyaa uummata qindeessuun namoota naannoo somaalee irraa buqqa'aniif deeggarsa barbaachisaa gochaa akka jiru fi warri achitti hafanis nagaan akka bahan mootummaa federaalaa fi qaamota dhimmi ilaallatu waliin hojjechaa akka jiran Obbo Addisuun himaniiru.
Dawoo yeroo baqattootaaf qophaa'e
Dararaan Oromoota irra gahaa jiru naannoo somaalee qofatti osoo hin daangeffamiin, Somalelaand Magaalaa Hargeessaa keessattis Oromootni hedduun dararamaa jiraachu jiraataan magaalatti Kaalid Imaam bilbilaan nutti himee jira. Dhalattoonni Oromoo lama rasaasa poolisii irraa itti dhuka'ee ajjeefamuun isaaniis gabaafameera.
Rakkoon kun dhimma daangaa fi walitti bu'iinsa uummataalle akka hin taane, ka'uumsa walitti bu'iinsa kanaa fi walumaagalatti miidha gama naannoo Oromiyaatiin lubbuu namaa fi qabeenyarra gahe gareen qoratu hundaa'ee hojii eegaluu Obbo Addisuu Araggaa BBCtti himaniiru.
Haaluma waamicha deegarsaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin Jimaata irraa kaasee taasifameen qarshiin miliyoona sadii oli walitti qabammusaa dubbi himaan MNO Obbo Addisu Aragaa ibsanii jiru.
Dr. Nagarii Leencoo, Ministirri dhimmoota Komunikeeshinii Mootummaa federaalaa gama isaanitiin, Mootummaa isaaniis mootummoota naannolee lamaanii fi jaarsolii biyyaa waliin ta'uun rakkoo kana furuuf hojjetaa akka jiru, madda rakkoo kanaa fi miidhaa walii galaan dhaqqabe qoratee yeroo dhiyootti ifa akka taasisu Jimaata darbe BBCtti himaniiru.
Saamiyaa Haasan attamiin jechoota shanii Keeniyaanoota akka itti hawwatte
Namoota ishee gudeedanii dararaniif dhiifama goote, ta'us ammallee biraa hin hafne